Iphansi Ngokhuni manje sekuthandwa kakhulu. Lonke iphuzu nobungane kwemvelo kanye sobuhle bayo. Floor amabhodi ingakhetfwa ngendlela ukuthi uhlangabezane nezimfuneko ezithile ukusebenza. Ngaphezu kwakho konke, akumelwe zintengezele ngesikhathi ihamba ngesikhathi ifenisha ngokwanele esindayo. Lapho uthenga kudingekile ukuba banake kokubili uhlobo izinkuni lapho amabhodi zenziwa, futhi ukujiya yabo.
Ukuze sub-phansi, isibonelo, kusukela izinkuni esithambile ebhodini kufanele kube okuhle. Ngokuvamile kuba zikaphayini engabizi noma ngesihlahla sonwele. Ngaphezu kwalokho, ngalezo zinhloso avame ukusetshenziswa kwezinhlobo ezibalulekile ngempela zezihlahla European. floorboards kwenzeka ukuthi kokuqeda, kufanele wenziwe amatshe kanzima. Lokhu kungaba beech, yebo isihlekehleke somuthi, yew, merbau. Kubukeka omkhulu mahogany phansi futhi larch.
Ngokuphathelene ukujiya, it is akhethiwe ngokuyinhloko ngokucabangela iphimbo phakathi imishayo. Kuleso simo, uma ibanga elibahlukanisile ka 80-85 cm, amabhodi kungathatha 3.5-4 mm obukhulu. Ngo isinyathelo 1 m bazodinga impahla mkhulu. Uma joists abekwa at ibanga 50-80 cm, kungenzeka ukusebenzisa amabhodi phansi ohlabayo. Ngaphezu kwalokho, uma uthenga kumelwe acabangele izinga material. Kufanele kube njengoba encane ifindo kungenzeka. Rot futhi umbazi mabhungane Yiqiniso, akufanele kube ngaso sonke.
Lapho ebeka isidingo ubambelela lokushisa kanye nomswakama izimo ezithile. Iqiniso ukuthi umuthi uyakwazi ukuncela umswakama emoyeni ezungeze. Ngakho-ke, nomswakama egumbini akumele leqe 60% futhi izinga lokushisa ngezansi 8 degrees. Flooring ibhodi, intengo ephakeme ngokwanele, kudinga handling ngokucophelela kanye nokusebenza. Mode yawo kuyoba elilungile kanye ukusetshenziswa ngokwengeziwe enamathela. Mangisho ukuthi kungenzeka uhla 18-70% wamanje amafulethi isilinganiso nomswakama. Ngakho-ke, kulesi rocks kwendle imigomo kufanele kugwenywe.
Ngo esitebeleni amamaki izinkuni - lezo makhulu bungahambisani lolo shintsho sezulu, iqukethe esiningi tannins. Floor amabhodi wenza oki, umlotha, teak noma merbau, kungenzeka ukhetho olungcono kakhulu kule ndaba. Uma abanikazi amafulethi ufuna ukubona ekhaya lakho kuyinto izinkuni flooring, kufanele bacabange mayelana ukuthenga humidifier. Ukusebenzisa ke egumbini ongalinikeza kakhulu ukuphila ngiphele ezinjalo.
Ukuze ezinengilazi Monolithic afaneleka flooring decking. It ihlukile evamile kuba phambi idivayisi spike / inkatho. enamathela okunjalo ubhekwa okuhlala isikhathi eside. Phakathi ukufakwa ibhodi lokuqala selibekiwe yokhalo odongeni. Ukuze izingodo impahla nail up, kuyisunduzele izigqoko zabo izinkuni.
Ukuze izibuya zokugcina isikhathi eside, kubalulekile ukuba isivikelo esengeziwe ngabo. Okokuqala, ibhodi ziphathwe umenzeli antifungal. Omunye nemibi ukhuni ubhekwa flammability yayo. Ngakho-ke futhi ukucubungula efiselekayo nokuningi kwakwakhe ekhethekile, okwandisa umlilo izakhiwo nemithi le nto. Nokho, esigabeni sokugcina ibhodi kufanele embozwe ukuvenisha noma ukudweba kubo.
Asphalt Cold: ukuthi kuyini, emakhiyubhi ubuchwepheshe
Zobumba amathayili ngaphansi itshe - okungcono phansi bembethe isikhumba
Abalingisi "Yilokho inja yami": ezinkulu cameo
Ulwazi olujwayelekile mayelana Isakhiwo College (Cherepovets)